Kismaayo News » Marka Guurka Laguu Diido!
Kn:Waad salaamantihiin walaalaha qeymaha badan ee kuxiran websitekan qaaliga ah. Maanta iyo maqaalkeena wuxuu kusaabsanyahay caado aad ufool xun Quursi oo ubaahan in la’iska kaashado cirib-tirkeeda.
“Wiil aan dhalay oo dagan wadanka Norway iyo gobar Soomaaliyeed ayaa go’aan ku gaaray inay isguursadaan; waxayna kuheshiiyeen inuu nikaaxu kadhaco magaalada Doha maadama aniga iyo gabadha adeerkeed soo korsadey wada daganahay halkaan. Nasiib wanaag, gabadha adeerkeed waa raggii aan mudadada dheer wada joogney wadanka Qatar. Kulan iyo iswaraysi kadib waxaan kuheshiiney inuu nikaaxu dhaco isbuuc kadib.Waxaan farta kasaaray lacagtii howsha lagu qabanlahaa!
Odayga maadama uu nala wadaagay dareenkiisa iyo sida looga gardaranyahay, waxaan isku daynay inaan samirsiino anagoo xasuusinay in dad badan oo Soomaaliyeed sidaas lagu sameeyo hortiis ayadoo wax ay galabsadeen aysan jirin. “Maxkamad la’aan ayaa laxukumay inaan loo guurin, lagana guursan maadama ay yihiin gabooyo, midgaamo iyo magacyo fara badan oo aan lagaraneyn meesha laga soo guuriyey!”
Intaan markale kulmidoona waa walaalkiin Aadam Abdi Abuzuhri oo idinleh Assalaamu Alaykum. Wixii talo iyo tusaale ah ku soo hagaaji;